သားဥအိမ်ကင်ဆာ - Hello Sayarwon
သားဥအိမ်တွေမှာ အခြေပြုပြီး ဖြစ်ပွားတဲ့ကင်ဆာကို သားဥအိမ်ကင်ဆာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဆီးစပ်နဲ့ဝမ်းဗိုက်ဆီ ကင်ဆာဆဲလ်တွေပျံ့နှံ့ပြီး ကုသရခက်ခဲတဲ့၊ အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေရောက်ကာမှ ဒီရောဂါရှိကြောင်း သိကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သားဥအိမ်ကင်ဆာဟာ အစောပိုင်းအဆင့်တွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာပြလေ့မရှိသလို ပြခဲ့ရင်လည်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းကဲ့သို့ စိုးရိမ်စရာမကောင်းတဲ့ အခြေအနေတွေသာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကြောင့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထအများဆုံး လက္ခဏာတွေကတော့
အကယ်၍ သင့်မှာ အထက်ပါလက္ခဏာတစ်ခုခု ဖြစ်လာခဲ့ရင်၊ အထူးသဖြင့် သင့်မိသားစုဝင်တွေထဲ သားဥအိမ်ကင်ဆာနဲ့ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ဖူးတဲ့ ရာဇဝင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဆီ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
သားဥအိမ်ကင်ဆာဟုတ်မဟုတ် ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုဖို့ ခန္ဒါကိုယ်အောက်ပိုင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးနဲ့ အသားစစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရဖို့ ရှိပါတယ်။
သားဥအိမ်ကင်ဆာကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသနိုင်သလဲ
သားဥအိမ်ကင်ဆာအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုနည်းလမ်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
သားဥအိမ်ကင်ဆာကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့် ၄မျိုး ပိုင်းခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၁ – သားဥအိမ် ၂လုံးတွင်သာ ကင်ဆာဆဲလ်များရှိသည့်အဆင့်
အဆင့် ၂ – ဆီးစပ်ပိုင်းရှိ အခြားနေရာများဆီ ကင်ဆာဆဲလ်များ ပျံ့နှံ့သည့်အဆင့်
အဆင့် ၃ – ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းဆီ ကင်ဆာဆဲလ်များ ပျံ့နှံ့သည့်အဆင့်
အဆင့် ၄ – ဆီးစပ်နှင့်ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းကို ကျော်လွန်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်များ ပျံ့နှံ့သည့်အဆင့်
သားဥအိမ်ကင်ဆာကို ခွဲစိတ်ကုထုံးနဲ့ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံးများ အသုံးပြုပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုထုံး – ကင်ဆာပျံ့နှံ့နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သားဥအိမ်နဲ့ သားဥပြွန်နှစ်ဖက်၊ သားအိမ်နဲ့ အနီးအနားက ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်မှာ ရောဂါရှာဖွေသိရှိခဲ့ရင်တော့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေရှိနေတဲ့ သားဥအိမ်နဲ့ သားဥပြွန်တစ်ဖက်ကိုသာ ဖယ်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး ကလေးရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကိုပါ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံး – ခွဲစိတ်ပြီး ကျန်ရှိနေတဲ့ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံး အကူအညီနဲ့ ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကင်ဆာဆေးကို အကြောထဲသွင်းပြီးဖြစ်စေ၊ ဝမ်းဗိုက်ထဲတိုက်ရိုက်သွင်းပြီးဖြစ်စေ၊ နည်းလမ်း ၂မျိုးလုံးနဲ့ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာအဆင့်မြင့်တဲ့ လူနာတွေမှာတော့ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံးကို ကနဦးကုသမှုအဖြစ် အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
သားဥအိမ်ကင်ဆာရှိနေပြီလို့ အဖြေထွက်လာခြင်းဟာ သင့်အတွက် အလွန်အမင်း စိတ်ဓါတ်ကျစရာ အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သင်ယုံကြည်ရမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြဖို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးအုပ်စု တစ်ခုခုမှာ ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကိုနားလည်ပေးမယ့်၊ သင်ပြောချင်သမျှ အကြောင်းအရာတွေကို နားထောင်ပေးမယ့် ဘဝတူ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါကို တစ်ကိုယ်တည်းရင်ဆိုင်ရတာဟာ အင်မတန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အလျောက် အခြားသူတွေရဲ့ အကူအညီကိုရယူဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်သမျှ ဆန္ဒတွေကို အတင်းအကြပ် မျှော်လင့်နေခြင်းဟာ သင့်ကို စိတ်ပင်ပန်းစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဦးတည်ချက်တွေကိုသာ အလေးပေး ပုံဖော်သင့်ပါတယ်။ ကင်ဆာကုထုံးတွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ နေထိုင်စားသောက်ပြီး လုံလုံလောက်လောက် အနားယူအားဖြည့်ခြင်းက သင့်အတွက် အကျိုးအရှိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Ovarian cancer. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ovarian-cancer/basics/coping-support/con-20028096. Accessed April 18, 2017.
About Ovarian Cancer. https://www.cancer.org/cancer/ovarian-cancer/about.html. Accessed April 18, 2017.